(၁၄)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနှင့် အရှေ့အာရှ စီးပွားရေး သုတေသနဌာန အုပ်ချုပ်မှု ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး ကျင်းပ | Myawady Webportal
(၁၄)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနှင့် အရှေ့အာရှ စီးပွားရေး သုတေသနဌာန အုပ်ချုပ်မှု ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး ကျင်းပ
(၁၄) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနှင့် အရှေ့အာရှ စီးပွားရေး သုတေသနဌာန (ERIA)အုပ်ချုပ်မှု ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကို ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ERIA အုပ်ချုပ်မှုဘုတ် အဖွဲ့ဝင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန်းအောင်ကျော် ပါဝင်တက်ရောက်သည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန စီးပွားရေး စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ERIA အုပ်ချုပ်မှု ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ Mrs. Hajah Mariah Haji Yahya က အစည်းအဝေး သဘာပတိအဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်၍ ERIA အုပ်ချုပ်မှု ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ သြစတြေးလျ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့က ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ ERIA အကြံပေး ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ၊ အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
အစည်းအဝေး၌ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်သော ERIA အုပ်ချုပ်မှုဘုတ် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ Mrs. Hajah Mariah Haji Yahya ၊ ERIA သုတေသနဌာန၏ President ဖြစ်သူ Professor Hidetoshi Nishimura နှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် Dato Paduka Lim Jock Hoi တို့က အမှာစကားများ ပြောကြားသည်။
အစည်းအဝေးက ERIA အုပ်ချုပ်မှု ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအသစ်အဖြစ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Ateneo Center for Economic Research and Development (ACERD)၏ အကြီးတန်း သုတေသနပညာရှင်နှင့် Ateneo de Manila University ၏ စီးပွားရေးပါမောက္ခ Professor Dr. Cielito F. Habito အား ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ERIA ၏ Chief Economist? Prof. Fukunari Kimura က ကိုဗစ်-၁၉ အလွန်ကာလတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးနှင့် ဒေသတွင်း စီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်နိုင်သည့် အခြေအနေများကို လည်းကောင်း၊ Senior Policy Fellow ၊Prof. Jun Arimaက အရှေ့အာရှနိုင်ငံများအတွက် ဆောင်ရွက်သည့် စွမ်းအင်မူဝါဒဆိုင်ရာ လေ့လာမှုလမ်းပြမြေပုံ (၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၂) ကို လည်းကောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။ ထို့နောက် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ERIA အုပ်ချုပ်မှုဘုတ် အဖွဲ့ဝင်များက အနာဂတ်ဒေသတွင်း စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ERIAက အာဆီယံ နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် သုတေသန အစီအစဉ်များကို အကြံပြုဆွေးနွေးသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယဝန်ကြီးက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဒေသတွင်းသာမက ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးစွဲလျက်ရှိကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို သုံးစွဲရာတွင် သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံမှု၊ ယှဉ်ပြိုင်မှု၊ အွန်လိုင်းမှ ငွေပေးချေမှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စိန်ခေါ်မှုများ ရှိနေကြောင်း၊ အာဆီယံနှင့် အရှေ့အာရှနိုင်ငံများရှိ SMEs များအကြား နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းစေရန် အတွက် ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်များကို ERIA သုတေသန လုပ်ငန်းများနှင့် အချိတ်အဆက်မိမိ လုပ်ဆောင်သွားရန် လိုကြောင်း အကြံပြုပြောကြားသည်။ ထို့ပြင် ဒုတိယဝန်ကြီးက ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် (RCEP)၏ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် အရှေ့ အာရှနိုင်ငံများ အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သုတေသနအဆင့်(၁) ပြုလုပ်မည့် ERIA ၏ အဆိုပြုချက်ကို ထောက်ခံကြောင်း၊ စာချုပ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့် မတူညီသည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများလည်း ပါဝင်သဖြင့် အဆိုပါသုတေသနမှ ပေါ်ထွက်လာမည့် အကြံပြုချက်များက ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် အနာဂတ်လုပ်ငန်း အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် အတူ နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အရာရှိများလည်း ပါဝင်တက်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။